Okirikiri ala kachasị mma n'ụwa | Njem akụkọ
Mariela Carril | 05/05/2022 17:00 | Emelitere ka 05/05/2022 17:59 | Ebe njegharị, Nduzi
N'ụwa nke ihe oyiyi na-achị, ọ na-adị arọ mgbe ị na-eme atụmatụ njem. Ọ̀ dị onye ọ̀tụ̀tụ̀ odida obodo duhiebeghị ma hazie ihe nile ka ha nọrọ n'ebe ahụ? E wezụga ihe ndị anyị nwere ike ịzụta, echiche, ọdịdị ala, ahụmahụ, bụ ihe na-akpali anyị ime njem. Oge ndị ahụ kwụsịtụrụ n'usoro iheomume nke anyị.
Ya mere, ka anyị hụ taa Okirikiri ala kachasị mma n'ụwa. Ikekwe ị nwere chi ọma ma hụworị ụfọdụ n'onwe gị. Ma ọ bụ ọ bụghị?
1 Ugwu Kirkjufell
2 Ugwu nke Moher
3 Stlọ Hall
4 Plitvice Ọdọ
5 Salar de Yuuni
Ugwu a dị na iceland ma ejiri m ohere a kwuo na Iceland nwere ọmarịcha ala mara mma nke ukwuu. Ọ bụrụ na-amasị gị okike na-ewepụ ume gị, m ga-ahazi njem ugbu a. A maara ya dị ka "ugwu ụka" ma ọ dị n'ebe ugwu ụsọ oké osimiri Iceland, nso obodo Grundarfjörour, dị nnọọ awa abụọ ụgbọala site isi obodo.
Ihe kacha mma bụ ịmara ya site n'ime njem zuru oke nke Snaefellsnes Peninsula, ma ọ bụrụ na ị were ngwugwu, ọ ga-abụrịrị na a ga-etinye ya n'ihi na e kwuru na. Ọ bụ ugwu kacha ese foto na mba ahụ. Ugwu ahụ nwere Ogwe 463 na ihe oyiyi ya nke e bepụrụ na mbara igwe na-eje ozi mgbe nile dị ka onye nduzi na akara maka ndị njem site na ala na oké osimiri. N'okpuru ugwu ahụ, e nwere ọdọ mmiri nke, n'ụbọchị doro anya, na-egosipụta ọmarịcha Mt.
Ọzọkwa, ọ bụ ugwu na na-agbanwe agba dị ka oge: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'oge okpomọkụ, aja aja na-acha ọcha na oyi na-adọrọ mmasị na ụbọchị mgbe anyanwụ etiti abalị na-enwu, gburugburu June equinox. Ma ọ bụghị banyere n'okpuru spooky ugwu ọkụ! N'etiti September na April.
N'ebe dị nso, ije dị nwayọọ, bụ ndị Mmiri mmiri Kirkjufellsfoss. Mmiri mmiri ndị a nwere obere jumps atọ na nke dị nro, ma ọdịiche dị n'ogo dị n'etiti ha bụ ihe kacha mma banyere ya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ịrị elu, ọ ga-ekwe omume ịme ya ma nwee ọmarịcha echiche, ma n'ugwu ma na mmiri mmiri.
N'ikpeazụ, a eziokwu: ugwu pụtara na oge 7 nke Game of Thrones, na ihe omume "N'azụ mgbidi".
Odida obodo a mara mma ma dị egwu dị na Ireland ma bụrụ akụkụ nke odida obodo n'ozuzu nke Burren. Ha na-ele anya n'Oké Osimiri Atlantic wee gbaa ọsọ n'akụkụ ụsọ oké osimiri maka kilomita iri na anọ. dị ka geology si kwuo kpụrụ ihe dị ka nde afọ 320 gara aga na taa UNESCO etinyela ha na Burren Global Geopark.
Ha bụ ọnụ ọnụ ugwu ama ama n'obodo ma sokwa na ndị ama ama n'ụwa. Ị nwere ike ịdebanye aha maka Ọnụ ọnụ ugwu nke Ahụmahụ Moher, otu ụbọchị dum na-anọ ebe a, ụmụaka anaghị akwụ ụgwọ nnabata. Enwere a 800 mita netwọk okporo ụzọ nchekwa na paved nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ihe nkiri ahụ, hụ Aran Islands, Galway Bay na Maamtaurks n'ebe dị anya na ọbụna Kerry n'ebe dị anya.
a na-enye ọtụtụ Nleta eduzi, ịmụta banyere akụkọ ihe mere eme nke ọnụ ọnụ ugwu na mpaghara n'onwe ya, ọdịda anyanwụ n'ụsọ oké osimiri Ireland, nso obodo Liscannor, na County Clare. Ị nwere ike iji ụgbọ ala, ụgbọ ala, igwe kwụ otu ebe, ọgba tum tum ma ọ bụ ụgbọ ala rute ebe ahụ. Ma ọ bụ ịga ije, kwa.
Iji mee ka nleta ahụ bụrụ ụbọchị dị mma ị nwere ike ịga leta mgbe niile webụsaịtị gọọmentị nke gụnyere amụma ihu igwe ma na-enye gị ohere ịhazi onwe gị nke ọma. Ọ dịkwa mma ịga leta ọnụ ọnụ ugwu na-abụghị oge ọsọ ọsọ, na n'ụzọ doro anya, n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, odida obodo pụrụ iche.
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ nnabata zuru oke, nke gụnyere nleta na Visitor Center na ihe ngosi ihe ngosi eziokwu na ihe nkiri, gbakwunyere ịgagharị n'okporo ụzọ na ịnweta O'Brien Tower na mbara ala ya, ntuziaka ọdịyo, maapụ na ozi. Ihe niile bụ 7 euro.
Okirikiri ọdọ mmiri a dị na Austria na ọ bụ akwụkwọ ozi. Ọ bụ na ugwu district nke Onyebuchi, na-esote Ọdọ Mmiri Hallstatt na nso ụfọdụ ọmarịcha ogbunigwe nnu. Ruo narị afọ nke XNUMX, ọ bụ naanị ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'okporo ụzọ ugwu na-adịghị ahụkebe nwere ike ịbịaru ya, mana ihe niile malitere ịgbanwe na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na-ewu ụzọ nke a na-esi na nkume nke ugwu ahụ n'onwe ya.
Ebe ahụ mara mma. Obodo a nwere ọmarịcha square nwere isi iyi dị n'etiti, ụfọdụ Chọọchị mgbe ochie, na ụdị Gothic na neo-Gothic, ọkpụkpụ mara mma nke nwere okpokoro isi 1200, ụlọ elu nke narị afọ nke XNUMX ebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-arụ ọrụ ugbu a, ọdọ mmiri n'onwe ya, nke mara mma ma juputara na azụ, enwerekwa mmiri mmiri na n'etiti ndị ọhụrụ na ndị njem nleta. nke 5 Aka mkpịsị aka, nke nwere ala transperent na yiri mkpịsị aka na-apụta n'ugwu ahụ.
N'ikpeazụ, nleta na Nnụnụ nnu Ị gaghị atụ uche. Ekwuru na ọ bụ ya Nke kacha ochie nnu n'ụwa n'ihi na o nweworị ihe irigbu puku afọ asaa. Ị nwere ike iru ebe ahụ na ụkwụ ma ọ bụ na funicular na e nwere ihe ngosi nka n'ime.
Ọdọ mmiri ndị a mara mma bụ na croatia ma guzobe ogige ntụrụndụ mba bụ ogige ntụrụndụ kacha ochie na mba ahụ. UNESCO gụnyekwara ha na ndepụta ya Ihe Nketa Ụwaee Ọdọ mmiri ndị ahụ dị na mpaghara karst dị n'etiti obodo ahụ, nke dị n'ókè Bosnia na Herzegovina.
Ebe echedoro nwere fọrọ nke nta ka 300 puku square kilomita, ya na ọdọ mmiri na waterfalls. a na-agụta Osimiri 16 n'ozuzu nke nguzobe ya bụ n'ihi njikọ nke ọtụtụ iyi elu na osimiri kamakwa n'okpuru ala. N'aka nke ya, a na-ejikọta ọdọ mmiri ndị ahụ ma na-agbaso usoro mmiri. N'etiti ha na-ekewa site eke travertine dams, etinyere n'ebe ahụ site algae, ebu na nje bacteria na narị afọ.
Anụ anụ ndị a dị nro dị nro ma dị ndụ, na-emekọrịta ihe mgbe niile na ikuku, mmiri na osisi. Ọ bụ ya mere ha ji na-eto eto mgbe niile. Enwere ike ịsị na a na-ekewa mkpokọta ọdọ mmiri ndị ahụ ụzọ abụọ, otu dị elu na nke dị ala. na-agbada site na elu nke mita 636 ruo mita 503 n'ebe dị anya nke kilomita asatọ. A na-etolite osimiri Korona site na mmiri nke na-esi n'ọdọ mmiri ahụ pụta n'ebe dị ala.
Ma ee, ọdọ mmiri ndị Croatia a ma ama maka ọdịdị na agba ha, green, blue, turquoise, agba na-agbanwe mgbe niile dabere na ọnụọgụ mineral dị na mmiri ma dabere na ìhè anyanwụ. Ọdọ mmiri ndị ahụ, n'aka nke ya, dị ihe dị ka kilomita 55 site n'Oké Osimiri Adriatic na obodo dị n'ụsọ oké osimiri Senj.
Salar de Yuuni
South America nwere ịrịba Okirikiri ala na otu n'ime ha bụ na obere ala nke Bolivia. Ọ bụ nnukwu ọzara nnu, nke kachasị elu n'ụwa, na obere ihe karịrị 10 puku 500 square mita nke elu.
Nnu nnu na-ezu ike na 3650 mita nke elu ma ọ nọ na mpaghara Bolivia nke Daniel Campos, na ngalaba nke Potosi, n'ugwu ugwu nke Andes. 40 puku afọ gara aga enwere ọdọ mmiri ebe a, Ọdọ Mmiri Minchín, emesia enwere ọdọ mmiri ọzọ, n'ikpeazụ, ihu igwe kwụsịrị iru mmiri wee kpọọ nkụ na ọkụ, na-emepụta nnu.
O yiri ka nnu nwere ihe dị ka nde tọn nnu 10 na a na-amịpụta puku tọn 25 kwa afọ. Ma, ọ bụghị naanị nnu bụ ihe dị mkpa taa. Uyuni nwekwara lithium na lithium dị mkpa maka batrị nke ngwaọrụ teknụzụ anyị niile. Tụkwasị na nke a, a na-eji ya eme ihe na-eme ka satịlaịtị dị mma n'ihi na ọ dị mma ugboro ise karịa oké osimiri maka otu nzube ahụ.
Ụgwọ ahụ nwere ọkpụrụkpụ nke dịgasị n'etiti ihe na-erughị otu mita na mita iri na mkpokọta omimi ya bụ mita 120, n'etiti brine na apịtị. Ọ bụ brine a nwere boron, potassium, magnesium, sodium na lithium, na ndị ọzọ.
N'ezie, ọ bụ otu n'ime njem nlegharị anya kacha ewu ewu na Bolivia na enweghị ọrịa na-efe efe ihe dị ka puku mmadụ 300 na-eleta ya kwa afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Okirikiri ala kachasị mma n'ụwa